Ethical-sosi marezinesi: ndeapi? Misiyano kubva kune yakavhurwa sosi? | Linux Vakapindwa muropa
Chokwadi iwe wakambonzwa izwi rezinesi kodhi yetsika kana yetsika-sosi. Mamwe marezinesi eHippocratic asina kunge akagamuchirwa zvine simba, kunyange izvi hazvireve kuti haashandiswe. Zvisinei, chokwadi ndechekuti aya marezinesi-sosi marezinesi anga asina nzira iri nyore ...
Iwe unofanirwawo kuziva OES (Sangano reEthical Source), boka risingabatsiri. Iyo yakavambwa nemutungamiriri wehunhu kodhi uye musiki weiyo Rezinesi reHippocratic, Uye Mupiro Chibvumirano, Coraline Ada Ehmke. Iye anotanga kubva papfungwa yekuti pfungwa yemahara uye yakavhurwa sosi software "Rusununguko Zero" (rusununguko rwekumhanyisa software sekuda uye nechinangwa chero chipi zvacho) yapererwa nenguva.
Tanto Coraline ada Sevatsigiri veaya marezinesi-ehutsika, ivo havadi yemahara kana yakavhurwa sosi software kuti ishandiswe chero chinangwa, asi panzvimbo pezvo vanoda kudzikisira mashandisirwo ekudzivirira zvakaipa.
Sezvo ivo vanotaura zvakanaka kubva kumafambiro aya, pasi rose zvachinja kubva pakazvarwa marezinesi akavhurika, uye rava neruvengo, uye ikozvino yakavhurwa sosi inoshandiswa pakuongorora kwakawanda, kwemauto, hurumende, uye kumwe kushandiswa kwekodzero dzevanhu kushandiswa pasi rose. Neichi chikonzero, pamberi peiyi nyowani kosi uye nyowani tekinoroji, magariro uye ezvematongerwo enyika matambudziko atinotarisana nawo, vadziviriri vehunhu-sosi marezinesi vanotsvaga kutora simba kure kune izvi zvisingadiwe zvinangwa.
Na, semuenzaniso, iyo Hippocratic License 2.1, chikamu cherezinesi rakafanana neMIT, asi zvikamu zvinoverengeka zvakawedzerwa. Izvi zvikamu zvinoratidza kuti ndiani kana chii icho chirongwa chiri pasi peiri rezinesi chingashandiswa. Muchokwadi, kodzero dzevanhu dzinotsanangurwa seidzo dzakatsanangurwa muUnited Nations Universal Declaration of Human Rights uye United Nations Global Compact.
Naizvozvo, software yacho haigone kushandiswa nechero munhu kana chinhu kune chero mhando yechiitiko chinotyora chero Kodzero Dzevanhu Mutemo.
Zvisinei nemafungiro emhando idzi dzemarezinesi, chokwadi ndechekuti haazogashirwe zvakanaka, zvirinani mune akakosha masosi akavhurika mapurojekiti. Icho chikonzero ndechekuti kune akawanda mapurojekiti ayo parizvino anoshandiswa izvo zvinangwa izvo vazhinji havangabvumirani, ine masimba ane simba kumashure. Nekudaro, ini handifunge kuti vanoregera aya marezinesi achivatadzisa kuita zvavanoita. Zvakare, kunyangwe dai vakaiswa, ini ndinofungidzira kuti vaizoremekedzwa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Ethical-sosi marezinesi: ndeapi?
tux muchina akadaro
Handifunge kuti Richard Stallman, muvambi wesoftware yemahara, angabvuma kuchengetedza rusununguko rwako, kuvanzika kwako uye rusununguko rwako kuronga nekugadzirisa kodhi, asi izvo zvinopesana, haana kuremekedza kodzero dzevanhu, inova ndiyo chinoyera munyika medu uye kuti iye anofanira kunge ari mumitemo yemapato ese munyika ino yevanhu vanopenga uye vanhu vanoshandisa chero chinhu kuseka zvinopesana.
Chekutanga zvinhu kutanga, "kuremekedza uye newe uchakudzwa"
Tora iwo masters masters ebhainari kodhi iyo mune isiri kure kure ramangwana nequotum computing iyo "bargain" ye "vakaipa vakomana" vanoshandisa kodhi kunyangwe kukonzera hondo dzisingaonekwe dzine maawa akaverengwa, muchina unogona kuve uye kubviswa panguva imwe chete uye ichabata maparamende asina chekuita ne "muto" uyu wehukuru hwehusimbe huri kuitika izvozvi.
Quantum komputa haizonyorwa pamwe neayo uye zero, uyezve, pachave netetraexcimal parameter izvo zvichazotadza kubiridzira, kunze kwekunge iwe uri iwe unogadzira iwo makomputa zvakakwana, izvo zvandisina chokwadi nazvo.
Nguva dzinogara dzichichinja, pamwe pacho pakuipa uye dzimwe nguva kune zvirinani, komputa ichachinjawo…. usava nekusahadzika kushoma.